Hetsipanoherana Sy Sorabaventy No Miandry ilay Shinoa Manampahefana Ambony Mitsidika An’i Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 7:21 GMT
Tanambokovokom-pasana vita amin'ny taratasy najoron'ireo Neo-Demaokraty tao amin'ny Kianja Timar ivelan'ny biraon'ny governemanta. Sary: Neo-Demaokraty tamin'ny alàlan'ny Hong Kong Free Press.
Tonga hanatanteraka fitsidihana mandritry ny andro telo ao Hong Kong ny 17 May teo i Zhang Dejiang (filohan'ny kaomity maharitry ny Kaongresim-pirenen'ny Vahoaka sady manampahefana ambony ao amin'ny Politburo -n'ny Antoko Kaominista Shinoa miandraikitra ny Raharahan'i Hong Kong sy Macau ). Teo am-pahatongavana dia notsindrian'i Zhang fa “hijery, hihaino ary hiresaka” izy mandritry ny fivahinianany, tamin'ny filazàny hoe nentiny niaraka aminy ny “fiahiana sy ny fitiavan'ny Governemanta Foibe.”
Na teo aza io fampanantenana fiahiana sy fitiavana io, manamboninahitry ny polisy manodidina ny 8.000 no nanaraka ny fitsidihany, izay nivoady handray izay “fepetra hentitra” manoloana ireo mpanao hetsi-panoherana mandritry ny fihaonambe “Tsioka iray Làlana iray” ataon'i Zhang ny Alarobia 18 May.
Navadiky ny polisy ny distrikan'i Wan Chai, toerana nipetrahan'i Zhang, ho lasa “faritra tsara aro” ary nofefen'izy ireo taminà sàkana goavana feno rano sy fefy vy ilay faritra.
Voafefy sakana feno rano ny distrikan'i Wanchai . Sary an'i PH Yang. Fampiasàna tsy ara-barotra
Mba hanakanana ireo sorabaventin'ireo mpanao hetsi-panoherana tsy ho hitan'i Zhang, nilasy teny an-tampon'ny Havoana Lion Rock mihitsy ny polisy, toerana iray isan'ny famantarana ilay tanàna, mba hahazoana antoka fa tsy hisy olona ho afaka hanakaiky eny. Na izany aza dia vitan'ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny Antoko politika Ligin'ny Sosialy Demaokraty ny nanantona sorabaventy iray goavana miloko mavo nitakiany ny hisian'ny tena Latsabato Andraisan'ny rehetra anjara tao amin'ny Havoana Beacon ho toy ny hafatra iray ho an'i Zhang.
Sorabaventy mivaky hoe, “Maniry fifidianana andraisan'ny daholobe anjara aho.” Nahanton'ny Ligin'ny Sosialy Demaokratika teo amin'ny havoana Beacon. Sary an'ny Apple Daily tao amin'ny Hong Kong Free Press.
Tarika iray hafa mpanao hetsi-panoherana avy amin'io vondrona io ihany no nahavita nanantona sorabaventy maintibe iray nitakiana ny fampitsaharana ny jadon'ny Antoko Kaominista Shinoa. Soratra nipoitra teny amin'ny lalambe migodana avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna rehefa nandalo ny fiara nitondra an'i Zhang. Betsaka ireo vondrona nanaraka ilay hetsika tamin'ny fanantonana sorabaventy miloko mavo teny amin'ireo toerana natao ho an'ny daholobe ho fandraisana an'i Zhang.
Sorabaventy iray mitaky ny hampitsaharana ny jadon'ny Antoko Kaominista Shinoa nahantona teny amin'ny lalambe migodana. Sary avy amin'ny Ligin'ny Sosialy Demaokraty.
Antoko politika iray hafa, ny Neo-Demokraty, nametraka tanambokovokom-pasana anjatony vita tamin'ny taratasy tao amin'ny Kianja Tamar teo ivelan'ny biraon'ny Governemanta mba hisaonana ireo izay maty tamin'ny valanaretina SARS tamin'ny 2003. Tamin'izay fotoana izay dia manampahefana ambony tao amin'ny faritanin'i Guangdong i Zhang Dejiang sady tomponandraikitra tamin'ny fitazonana ireo torohay momba ilay valanaretina. Niparitaka avy any Guangdong nankany Hong Kong ilay valanaretina, niafara tamin'ny fahafatesan'olona 299 tao an-tanàna.
Nitranga tao amin'ilay fihaonambe Tsioka iray, Làlana iray ny hetsi-bahoaka goavana nandritry ny fitsidihan'i Zhang. Tao anatin'ny kabariny, notsindriany fa hanohana tanteraka ny fandraisana anjaran'i Hong Kong amin'ilay tetikasam-pirenena ho fampandrosoana ny faritry ny sisintany ny governemanta foibe. Nosakanana tsy ho tonga teny akaikin'ny toerana ka hanakiana an'i Zhang ho tsy “nihaino” ny fitakian'ireo mponina ao an-toerana ireo mpanao hetsi-panoherana mpandàla ny demaokrasia, ary nihiaka ny “Tsy Mila Ny Tsioka iray Lalàna iray“. Very tao anatin” ny famoriambahoaka nataon'izy ireo teo ivelan'ilay faritra tsara aro” i Zhang Dejiang. Nitatitra ny zavanisy avy eny anaty fihetsiketsehana ny tranokalam-baovao tsy miankina “Hong Kong Free Press” :
Ho fanampin'ireo hetsipanoherana nokarakaraina, nanao hetsika ihany koa ny tsirairay mba hampitàna ny feon'izy ireo. Ohatra, i Anthony Lam nandraikitra sorabaventy teo amin'ny fiarany izay nivaky hoe, “Very i Zhang Dejiang, Maniry fifidianana andraisan'ny daholobe anjara aho!”
Sorabaventy eo ambony fiara mivaky hoe, “Very i Zhang Dejiang. Maniry fifidianana andraisan'ny rehetra anjara aho!” Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'i Anthony Lam.
Teny amin'ny lalambe migodana mankao an-tanàna vaovao Tseung Kwan O, nametraka ity soratra fiarahabana ity ny olona, “Miarahaba anao ny mponina eto Tseung Kwan O ry Zhang Dejiang tamin'ny famoronana fitohanan'ny fifamoivoizana”:
Soratra fiarahabàna tao amin'ny tanàna vaovao Tseung Kwan O. Sary: pejy Facebook